Masiibada El Nino oo laga cabsi qabo in mar kale ay dunida ku dhufato - BBC News Somali
Masiibada El Nino oo laga cabsi qabo in mar kale ay dunida ku dhufato
Lahaanshaha sawirka NOAA/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image caption Waa sawir muujinaya masiibadii El Nino ee sannadkii 2015-kii sare u qaaday heer kulka badda Pacifici-ga
Hay'adda saadaasha hawada adduunka ee WMO ayaa sheegtay in 70% ay u badantahay iney masiibada El Niño ay ku dhufato dunida, ka hor inta uusan dhammaanin sannadkaan.
Masiibadii El Niño ee ugu dambeysay waxay dhacday sanadkii 2015-16 waxayna saameyn ballaaran ku yeelatay cimilada adduunka oo idil.
Hase ahaatee , khubarada cilmi baareyaasha ah ayaa sheegay ineysan rajeyneynin in nooca El Niño ee hadda la filayo ay u awood badnaan doonto sida tii dhacday 2015-16.
Saraakiisha hay'adda WMO ayaa laga soo xigtay in isbaddalka cimilda adduunka ay saameyn ku yeelaneyso dabeecadihii ay lahaan jireen musiibooyinka dabiiciga ah.
Arrintaas ayaase hadda dhanka kale isku baddashay, sida ay qabto hay'adda saadaasha hawada adduunka ee WMO, taasoo aaminsan in 70% ay dhici karto El Niño inta aan laga gudbin sannadkaan.
"Hay'adda WMO ma rajeyneyso culeys la eg kii ka dhashay El Niño-dii awoodda badneyd ee dhacday 2015-2016, laakiin wali waxaan fileynaa saameyn la taaban karo," ayuu yiri xog hayaha guud ee WMO Petteri Taalas.
Markii ugu horreysay abid, hay'adda WMO ayaa macluumaadka ku saabsan El Niño ku soo dartay macluumaadka heerka cimilada ee bilaha September-November.
Hay'addaan ayaa sheegtay in heer kul ka sarreeya sida caadiga ah laga saadaaliyay inta badan dalalka Aasiya ee ku teedsan badweynta Pacific, Europe, Waqooyiga America iyo qeybo badan oo ka mid ah dalalka xeebaha leh ee Koonfurta America.
"isbaddalka cimilada wuxuu saameyn ku leeyahay hannaanka dabeecad ee El Niño iyo La Niña iyo waliba awooddooda," ayuu yiri Petteri Taalas.
War bixin taas ka duwan oo ay soo saartay hay'adda saadaasha hawada ee dalka Japan ayaa lagu sheegay in 60% uu adduunka halis ugu jiro musiibada El Niño, taasoo la filayo laga billaabo bisha September ilaa bisha November.